Mijoro amin’ny fahalalana onony
"Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin' ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo." - 1 Kor. 9:25.
Tokony homen-danja manokana mihitsy ny fahononan-tena kristianina eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiangonana. Tokony ho fomba fiaina mihitsy izany, fomba fiasa, fahazarana mitondra fiovana, ary toetra. - Te 165.
Mila omena lesona hanome hery hiatrehana sy handresena ny ratsy ny ankizy (...) Mila mitandrina tsara mikasika ny karazan-tsakafo arosony eo anatrehan'ny zanany ny ray aman-dreny. Ny mpisotro toaka ihany matetika no voakasika rehefa miresaka momba ny fahalalana onony ao an-tokantrano. Aoka mba ho sakafo mampitombo ny vatana aman-tsaina no omena ny ankizy,fa halaviro azy ireo kosa ny sakafo be hanitra sy masiatsiaka izay mampitsiry ao aminy ny filana azy ireny mafimafy kokoa hatrany. Tena misy ifandraisany betsaka amin'ny fitomboan'ny aretina sy ny heloka bevava ny zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro mahery. Misoko mangina ny fiasan'ny paraky kanefa poizina mahery vaika izany. Tsy tambo isaina ny voka-dratsiny.
Tsy zovina amintsika intsony ny zava-doza ateraky ny zava-mahadomelina. Hita manerana izao tontolo izao ny fahalavoana sy ny fahasimban'ny zanak'olombelona, dia ireo fanahy nahafatesan'i Kristy sy nitomanian'ny anjely. Teboka mainty eo amin'ny fandrosoana izay ireharehantsika fatratra izy ireny. Ireo izay nihazakazaka fahiny mba hahazo loka dia nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fahalalana onony. Tsy mihoatra lavitra noho izany ve isika izay mihazakazaka mba hahazo ny satro-boninahitry ny lanitra? Mila manao ny ezaka rehetra mba handresena ny ratsy isika. - Ms, t. 29, 1886.
Amin'ny fotoana rehetra, dia ilaina ny manana tanja-tsaina amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny fahalalana onony hentitra. - YI, 24 Septambra 1907. Tadidio fa isan' andro no anorenanao fahazarana (...) Arakaraka ny anarahanao ny lalan'ny fahasalamana no hahaizanao manavaka ny fakam-panahy sy manohitra azy ireny, ary koa hahitanao mazava tsara ny lanjan'ny zavatra maharitra mandrakizay. - YI, 25 Aogositra 1886.